Akwụkwọ ahụa na-ere ahịa: Atụmatụ 5
Ndụmọdụ Ederede White na-ebugharị Ahịa
Satọde, Ọgọstụ 23, 2014 Fraịde, Ọgọstụ 22, 2014 Douglas Karr
Kwa izu, m na-ebudata akwụkwọ akụkọ na-acha ọcha ma gụọ ha. Na njedebe, a na-atụle ike nke akwụkwọ akụkọ, ọ bụghị na ọnụọgụ nke nbudata, mana ego ị ga-enweta site na ibipụta ya. Papersfọdụ akwụkwọ ọcha dị mma karịa ndị ọzọ na achọrọ m ịkekọrịta echiche m banyere ihe m kwenyere na ọ na-eme nnukwu akwụkwọ akụkọ.
Akwụkwọ akụkọ ọcha na-aza okwu dị mgbagwoju anya na nkọwa na data nkwado. Ahụrụ m ụfọdụ akwụkwọ ozi ọcha nwere ike ịbụ naanị blog post. Akwụkwọ akụkọ na-acha ọcha abụghị ihe ịchọrọ ka atụmanya inweta ntanetị dị mfe, ọ karịrị nke ahụ - karịa post blọgụ, ihe na-erughị eBook.
Akwụkwọ akụkọ ọcha Ekekọrịta atụ si n'ezie ahịa, atụmanya, ma ọ bụ mbipụta ndị ọzọ. O zughi ide ederede nke na-ekwu na tesis ahụ, ịkwesịrị inye ezigbo akaebe nke ya.
Akwụkwọ akụkọ ahụ bụ mara mma nke ọma. Mmetụta mbụ na-agụta. Mgbe m mepere akwụkwọ akụkọ ma hụ Microsoft Clip Art, anaghị m agụ akwụkwọ ọzọ. Ọ pụtara na onye edemede ahụ eweghị oge… nke pụtara na ha nwere ike weghị oge n’ide ederede, ma.
Akwụkwọ akụkọ ahụ bụ anaghị ekesa. Ekwesịrị m ịdebanye aha maka ya. You na-azụ ahịa ozi gị maka ozi m - ị kwesịrị ị tozuru m dịka onye ndu na ụdị ndebanye achọrọ. Ingdị ọdịda Page ụdị na-adị mfe ịrụzu site na iji ngwa ọrụ dịka nke onye na-ewu ụdị ntanetị n'ịntanetị. Ọ bụrụ na ejighị m isiokwu ahụ, agaghị m ebudata akwụkwọ akụkọ ahụ. Nye nnukwu peeji ọdịda nke na-ere akwụkwọ akụkọ ọcha ma nakọta ozi ahụ.
Akwụkwọ 5 na 25 na-acha akwụkwọ ọcha kwesiri ikwali zuru m ka m were gị dịka ikike na akụ maka ọrụ ọ bụla. Gụnye ndepụta nlele na ebe maka ndetu ka a ghara ịgụ ma tụfuo ha. Echefukwala ibipụta ozi kọntaktị gị, weebụsaịtị, blọọgụ na kọntaktị mmekọrịta gị na ndị ọrụ.
E nwere ụzọ ole na ole iji mee ka akwụkwọ akụkọ na-eme ka ndị ahịa nwee ike ịre ahịa.
Nghọta - Nke mbu bu iji uzo doro anya gwa onye na - agu ya otu esi edozi nsogbu ha nke oma. Nkọwa ahụ zuru oke, n'eziokwu, na ha ga-akpọ gị ka ị lekọta nsogbu ahụ karịa ime ya n'onwe ha. Ndi-do-gi onwe gi ga ewere ihe omuma gi ime ya n'onwe ha. echegbula… ha na-agaghị na-akpọ gị na agbanyeghị. Edeela m akwụkwọ ole na ole na njikarịcha WordPress blog - enweghị ụkọ ndị mmadụ na-akpọ m ka m nyere ha aka ime ya.
iru eru - secondzọ nke abụọ bụ ịnye onye na - agụ ya ajụjụ na azịza niile tozuru gị dịka ihe enyemaka ha karịa onye ọ bụla ọzọ. Ọ bụrụ na ị na-ede a whitepaper na "Olee iku a Social Media ndụmọdụ" na ị na-enye ndị ahịa gị na-emeghe contracts na ha nwere ike ịhapụ n'oge ọ bụla… -eme na ngalaba nke gị whitepaper na kpakorita contracts! N'aka ozo, kwado ma gwuo egwu.
Kpọọ ka ị rụọ ọrụ - Ọ na-eju m anya etu ọtụtụ akwụkwọ ọcha m gụrụ ebe m kwụsịrị edemede ahụ na enweghị nghọta banyere onye edemede, ihe kpatara ha ji tozuo oke ide banyere isiokwu ahụ, ma ọ bụ otu ha ga - esi nyere m aka n’ọdịnihu. Inye doro anya-na-edinam gị whitepaper, tinyere nọmba ekwentị, adreesị, gị ahịa ọkachamara aha na foto, ndebanye peeji nke, adreesị email email ha niile ga-sikwuo ike iji tọghata-agụ.
Tags: content Marketingotu esi ede edemedeire akwụkwọ akụkọAkwụkwọ edemedeede ederede
Jul 24, 2010 na 4:16 PM
Isi ihe, Doug. Achọpụtala m na ọtụtụ ụlọ ọrụ na-anwa iji akwụkwọ ọcha mee ngwangwa ahịa ahịa hapụ abụọ n'ime ihe ndị kachasị mkpa. Nke mbu, ha na akowa nsogbu di nkpa nke di nkpa banyere ihe ha nyere dika ngwa ahia ma obu oru, na abuo, gini mere ha ji di iche? Ọ bụchaghị mma. (Onye na-azụ ahịa ga-ekpebi nke ahụ, n'agbanyeghị ugboro ole onye na-ere ya nwere ike ikwu ya).
Jul 24, 2010 na 9:31 PM
@freighter, ekwetaghị m na ị kwesịrị ịkọwa ihe dị iche gị bụ - mana onweghị onye n'eziokwu kwenyere ụlọ ọrụ ọzọ naanị site n'ikwu na ha dị iche. Ọ bụ ya mere o ji dị mkpa iji zụlite ozi ruru eru n'ime akwụkwọ akụkọ ọcha. Site na ịkọwa iru eru, ị nwere ike ịiche onwe gị!